यी दुई वर्षमा नयाँ शक्ति पार्टी जुट्नेभन्दा फुट्ने धेरै किन ? त !Samachar Pati
यी दुई वर्षमा नयाँ शक्ति पार्टी जुट्ने भन्दा फुट्ने धेरै किन ? त !
३० जेठ l नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । ३० जेठ ०७३ मा डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा दशरथ रंगशालामा आयोजित विशेष समारोहमा नयाँ शक्ति पार्टी गठन भएको थियो । पूर्वमाओवादी, सरकारी सेवाबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी, विभिन्न विषय विज्ञ र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकालाई गोलबद्ध गर्दै भट्टराईले नयाँ शक्ति गठन गरेका थिए । तर, यी दुई वर्षमा नयाँ शक्ति पार्टी जुट्नेभन्दा फुट्ने धेरै भएको छ ।
यस अवधिमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित पार्टी अगाडि बढ्न नसकेपछि समस्या देखिन थाल्यो । नयाँ शक्तिको संगठनमा युवा जमातको आकर्षण देखिएन भने कम्युनिस्ट स्कुलिङ र गैरकम्युनिस्ट स्कुलिङबीच अन्तद्र्वन्द्व बढ्दै गएपछि पार्टी थप कमजोर हुँदै गयो ।
पार्टीमा असन्तुष्टि सुरु हुँदै गएपछि सबैभन्दा पहिला वाम बुद्धिजीवीका रूपमा संगठित मुमाराज खनालले नयाँ शक्ति पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरे । त्यसलगत्तै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले १ चैत ०७३ सालमा नयाँ शक्ति छाडे । पार्टीको सुरक्षा तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुखसमेत रहेका पूर्वडीआइजी गणेश राई पनि एक वर्षसम्म पार्टीमा टिक्न सकेनन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोचेअनुरूप नतिजा नआएपछि नेता देवेन्द्र पौडेलसहित १५ जना नेताले गत २ भदौमा नयाँ शक्ति छोडे । पौडेलसहितको टिममा पूर्वमाओवादी नेता कार्यकर्ता थिए । त्यसलगत्तै रामचन्द्र झा र रामकुमार शर्मा नयाँ शक्ति छोडी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ शक्तिमा निष्क्रिय रहेका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटा गत २२ फागुनमा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे ।
यसरी संगठित भएका नेता कार्यकर्ताले पार्टी छोड्न थालेपछि नयाँ शक्ति कमजोर हुन थालेको हो । अहिले माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका नयाँ शक्तिमा भट्टराई र पत्नी हिसिला यमी, देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, गंगानारायण श्रेष्ठ तथा वन्दना सुवेदी मात्र छन् । धेरैजसो माओवादी स्कुलिङका नेताले नयाँ शक्ति छाडेका छन् ।
देउवा र भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीबीच आज बिहान भेटवार्ता
वाम गठबन्धनका अर्का उमेदवार सवार गाडीमा फेरी हाते बम प्रहार,
उद्योग मन्त्री थापालाई लक्षित गरी बम विष्फोट